July 17, 2021 – Kalfadhi
July 17, 2021 Hassan Istiila0 comment
Dabayaaqadii bishii Juun, dowladda Galmudug waxay soo bandhigtay miisaaniyadda sanadka 2021 oo gaareysa US$ 27 milyan oo doollar. Miisaaniyaddani oo ahayd tii ugu badanayd abid, ayaa u dhigantaa koror 58% marki loo eego tii sanadki 2020. Ka dib dhowr sano oo koror yar oo joogto ahi, marka laga reebo hoos u dhaca sanadki 2019, Galmudug ayaa labadii sano ee la soo dhaafay diiwaan gelisay koror miisaaniyadeed oo aad u ballaaran. Waa Maxay Miisaaniyadda? Sanad kasta dowladaha maamul goboleedyada iyo tan federaalka waxay soo saaraan qorsheyaal lagu qoondeeyo maalgelinta adeegyada iyo…
Baarlamaanka Puntland oo taageeray in dib loo celiyay hindise xeereedka dhowrista goobaha taariikhiga
July 17, 2021 July 17, 2021 Hassan Istiila0 comment
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Puntland mudane Cabdiirashid Yuusuf Jibriil oo ay weheliyaan Guddoomiye ku-xigeenka 1-aad Mudane, Cabdicasiis Cabdullahi Cusmaan iyo Guddoomiye ku-xigeenka 2-aad mudane Ismaaciil Maxamed Warsame, ayaa maanta shir guddoomiyey fadhiga 15-aad ee Kalfadhiga 48-aad ee Golaha Wakiillada DPL, waxaana fadhiga soo xaadiray 40 Mudane. Guddiga arrimaha aulshada, dhaqanka, warfaafinta iyo isgaarsiinta oo gacan ku hayey hindise xeereedka dhowrista goobaha taariikhiga, ayaa maanta warbixin ka horjeediyay golaha wakiillada. Guddiga ayaa hindisaha wadatashi kala soo yeeshay wasaaradda warfaafinta, isgaarsiinta iyo dalxiiska ee Puntland, waxayna golaha u soo jeediyeen in dib loo…
Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug oo kormeeray dhismaha xarunta Jaamacadda Umadda faraceeda Galmudug
Guddoomiyaha golaha baarlamaanka Galmudug Dr Maxamed Nuur Gacal, ayaa todobaadkan kormeeray horumarka laga sameeyey dhismaha xarunta Jaamacadda Umadda ay ku leedahay magaalada Caabudwaaq ee Galmudug. Mudane Dr Maxamed iyo xubnihii la socday ayaa agaasimaha jaamacadda Umadda faraceeda Galmudug Mudane Maxamuud Dirir ka dhageystay warbixin ku saabsan kuliyaddaha ay bixiso Jaamacadda, dufcadaha kala duwan ee ka qalin badeshay Jaamacadda, kuliyaddaha la rajeynaayo in lasoo kordhiyo, tirada ardeyda ee la filaayo in ay sii kordhaan iyo dhismayaasha socdo. Wasiir Cabdi Maxamed Jaamac (Waayeel) oo kamid ahaa aas-aasa-yaashii jaamacadda faraca Galmudug, ayaa ka…
Guddiga doorashada maamulka Jubbaland ayaa jimcihii shalay shaaciyay in 25-ka bishan ay qaban doonaan doorashadda xildhibaannada aqalka sare ee baarlamaanka. Guddiga oo shir jaraa’iid qabtay ayaa xusay in ay diyaar yihiin dhinacooda, ayna qaban doonaan doorasho xor iyo xalaal ah. Sidoo kale, guddiga ayaa musharixiinta doonayo inay u tartamaan aqalka sare ka codsaday inay u diyaar garoobaan doorashada. Halkan ka akhriso.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo dhaweeyay jadwalka hannaanka doorashooyinka labada aqal ee BFS ee uu soo saaray Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal ee FEIT. “Waxaan soo dhaweynayaa oo bogaadinayaa jadwalka ay shaaciyeen guddiga maamulka doorashooyinka ee heer federaal, kaas oo si faahfaahsan u qeexaya xilliyada iyo qaabka ay u dhaceyso doorashada Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. “Shacabka Soomaaliyeed waxa ay naga sugayaan doorasho nabdoon, daahfuran oo ka fog eex iyo qof jecleysi, kuna dhacda…
Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federal (GDHF) ayaa xalay soo saaray jadwalka cusub ee doorashadda labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Jadwalka cusub ayaa wax yar ka duwan jadwalkii ay dhowaan soo saareen Golaha Wadatashiga Qaran, waxaana uu jadwalkan uu dhigayaa in 7 October la dhaarinayo Xildhibaanada labada Aqal, halka jadwalkii hore ee Golaha Wadatashiga Qaran uu dhigayay in 10 October la dooranayo Madaxweynaha Soomaaliya. Halkan ka akhriso: